Ungayifumana njani isikrini se-Android kumnyama nomhlophe | I-Androidsis
Ujika njani isikrini sakho se-Android sibe mnyama nomhlophe
Abasebenzisi abaninzi bathanda ukuzama isikrini sabo sefowuni ye-Android. Ngale ndlela, sinethuba lokubeka amaphephadonga amatsha, kuba ukhetho olukhoyo lubanzi. Ukuba siyafuna, sinokuba no imvelaphi eyahlukileyo yonke imihla. Nangona iqhinga esikubonisa lona apha ngezantsi alinanto yakwenza noku.
Kuba sikubonisa indlela apho singabeka isikrini sefowuni yethu ye-Android ngombala omnyama nomhlophe. Liqhinga elilula, elingenakusetyenziswa ngaphezu kokubonwayo, kodwa kwabo bahlala bezama ngefowuni yabo, ngokuqinisekileyo yinto enomdla.
Ukwenza oku, Kuya kufuneka sisebenzise ukhetho lonjiniyela we-Android. Kwimeko apho ungazi ukuba yenziwe njani, kufuneka siye kuseto lwefowuni. Ngaphakathi kubo kufuneka sifikelele kwicandelo elibizwa «Malunga nefowuni». Kuyo sifumana inani lokudityaniswa kwefowuni, ekufuneka sicinezele kuyo amatyeli aliqela (eyahlukileyo ngokuxhomekeke kwimodeli) ide isixelele ukuba sizilungisile iisetingi zonjiniyela.
Xa sigqibile, kufuneka sibuyele umva. Siza kubona ukuba olu khetho okanye useto lonjiniyela luphuma kuseto lwefowuni. Kuya kufuneka singene kuwo kwaye apho kufuneka sijonge Icandelo eligama lalo liya kuba "linganisa indawo yombala". Igama lingahluka ngokuxhomekeke kuhlobo okanye uguqulelo lwe-Android.
Ngaphakathi kufuneka singene kuseto kwaye emva koko sikhetha ukhetho lwe-actomatopsy. Ngale ndlela, isikrini sefowuni yethu ye-Android ngoku simnyama kwaye simhlophe. Amava ahluke ngokupheleleyo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ngaphezulu kwesinye aya kuwufumana unomdla.
Indlela yokubuyela esiqhelweni yile ukucima eli candelo le-actomatopsia, le sisandula ukuyenza. Ke, isikrini siza kubuyela kwimibala yaso yesiqhelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ujika njani isikrini sakho se-Android sibe mnyama nomhlophe
Amaqhinga okufumana okuninzi kwiGboard kwi-Android
IMotorola Moto One iyafumaneka ngoku eMelika